MomentFeed: Ngwọta Azụmahịa Ahịa Ahịa maka Achọrọ na Nchịkọta | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa na agbụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ma ọ bụ karịa aha, ma ọ bụ ụlọ ahịa mkpọsa, ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ n'ofe ahịa ọ bụla na usoro iji kwalite ọnọdụ ọ bụla na-enweghị ụdị usoro. Achọghị akara gị ka ọ ghara ịchọta mpaghara, kpuo ìsì maka njikọ ndị ahịa mpaghara, enweghị ngwaọrụ iji mepụta mgbasa ozi dị mkpa mpaghara, ha anaghị achịkwa njikwa mgbasa ozi zuru oke.
Mejupụta mbọ ahụ na ụfọdụ mgbanwe mgbanwe agwa ndị ahịa:
80% nke ndị na-azụ ahịa chọrọ mgbasa ozi ahaziri ka ọnọdụ ha
Enwere ihe karịrị ijeri 1.7 ijeri na-arụ ọrụ na akaụntụ ekwentị
90% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu nyocha ntanetị na-emetụta mkpebi ịzụta
88% nke ndị na-azụ ahịa na-eji ekwentị mkpanaaka achọ ngwaahịa na ọrụ dị nso
Ọ bụ oke mmiri ozuzo. Kwesiri ikpughe mpaghara nke enyere ndị ahịa obodo ahụ aka. Maka nnukwu agbụ mba na aha njirimara, ịla n'iyi na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara abụrụla nsogbu n'ihi oke ọnọdụ na azụmaahịa ha chọrọ iji kwado. Gbakwunye na nke a bụ eziokwu na akara ngosi mmekọrịta, dịka ntụle na nyocha, na-emetụta nsonaazụ ọchụchọ, yana ọnụọgụ ozi nke ekwesiri iji nyochaa maka azụmaahịa nwere ọtụtụ narị ma ọ bụ puku ebe nwere ike iyi ihe na-agaghị ekwe omume.
Iji dozie nke a, ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ha, dị ka Applebee, Jamba Juice, na kọfị kọfị, tụgharịrị Oge Na-adị, iji mee ka ọ dịkwuo mfe ijikwa na-ebuli isi data ụlọ ahịa dị na mpaghara dị ka adreesị, oge arụmọrụ, nyocha na foto.
Ulo oru nke MomentFeed na ejikota otutu ebe di iche-iche na ndi ahia nke obodo n’ime obodo ha na-ejere ozi, na-ekwe ka ulo oru ha nyefee ahia di nkpa, ahia di n’akuku otutu puku onodu.
MomentFeed Mpaghara Azụmaahịa Platform
Ngwurugwu MomentFeed nwere ihe ngwọta maka ọchụchọ na nchọpụta, mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ na ahụmịhe ndị ahịa.
Chọọ na Nchọpụta - MomentFeed na-etolite njikọ mpaghara SEO dị oke mkpa maka gị na akpaghị aka, na-akpụ ma na-echekwa usoro okike nke na-eme ka ọchụchọ mpaghara gị dịkwuo mma ma na-enye ntụkwasị obi na ọnọdụ gị na nyiwe niile.
Mediagwọ Media - gbanwee otu mkpọsa mba dị iche iche na mkpọsa ndị mmadụ iche iche maka ebe ọ bụla dị mfe site na ịpị aka ole na ole na-enye gị ohere iwepụta ọdịnaya gafee netwọkụ mmekọrịta dị iche iche.
Njikwa Mgbasa Ozi - ntinye ngwa n’ime ngwa dika Facebook, Instagram, Foursquare, Google+ na Twitter. Dị ka foto ma zaghachi ndị ahịa n'ọtụtụ. Fanye ọdịnaya dị ike iji mepụta mkpa dị na mpaghara ma kekọrịta ọdịnaya.
Ahụmịhe Ndị Ahịa - nchịkọta nchịkọta na nyocha si na Facebook, Foursquare, Google na Yelp na-enye ndị ahịa ohere inyocha ma zaghachi ndị ahịa nke ọma. Ndị ọrụ nwere ike ịdọrọ nyocha site na otu ebe, were ụdị ọkwa kpakpando wee zaghachi n'otu n'otu ma ọ bụ otu ndị na-ekwu okwu.
MomentFeed mara ọkwa na ọ na-aga n'ihu n'ike ya dị ka ihe akwadoro Google My Business Onye Mmekọ API. Site na mmekorita a, MomentFeed nwedịrị ike ịkwado ụdị mba dị iche iche iji melite nsonaazụ ọchụchọ mpaghara ha na mgbasa ozi Google Mgbasa ozi site na ijikọta ndepụta Google My Business na ikike geo-njikarị dị ugbu a.
Google My Business (GMB) na-enye ndị azụmaahịa ohere ịmepụta ma jikwaa ndepụta azụmahịa na-akwụghị ụgwọ na ntanetị netwọkụ Google, yabụ ndị ahịa nwere ike ịchọta ebe ụlọ ahịa dị mfe mgbe ha na-eme ọchụchọ na Google Search na Maps. Mgbe e jikọtara ya na MomentFeed nke ugbu a geo-njikarịcha ike, ahịa nwere ike hụ na ukwuu ziri ezi, anọgidesi na mpaghara onodu maka onye ọ bụla, obodo ụlọ ahịa mgbe ihe atụ, na-eji ọkụ chọọ okwu dị ka “kọfị,” “Sanwichi shop” ma ọ bụ “igwe ndọrọ ego m nso. ”
MomentFeed bụkwa otu Mmekọrịta Instagram, Ogologo akụkụ maka Onye Mmekọ Azụmaahịa tinyekwara onye otu mmemme Mmemme Ahịa Facebook (FMP)
Tags: yinyeFacebooknyocha facebookakụkụ anọuzo nchoputaahagoogle azụmahịa mnyocha googlegoogle +instagramnchọta mpagharamkpọsa ọchụchọ mpagharaobodo seoNa-adịghị anyaọtụtụ-ọnọdụnjikwa elekọta mmadụTwitterYelpyelp nyocha